Kheyraadka - Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale
Qolalka Deganaanshaha Virtual
Iyada oo arday badan iyo qoysasku ay la jaanqaadayaan "caadi cusub" inta lagu guda jiro Cudurka faafa ee caalamiga ah ee COVID-19, waxaa si gaar ah muhiim u ah in la helo qaabab lagula qabsado oo lagu nasto. Shaqaalaha la-talinta iyo shaqaalaha sooshaalka dugsiga ee dugsiyo fara badan oo ku yaal Degmada ayaa abuuray goobo internetka ah si loo helo qalab iyo istaraatiijiyado lagu maareeyo caafimaadkooda bulsho-shucuureed.
"Rajadeennu waa in ardayda, shaqaalaha iyo qoysaskuba ay u isticmaali doonaan boggan ilaha waxtarka u leh xilliyadaan adag iyo xitaa ka dib markaan ku laabanno 'caadi' cusub," ayay tiri Laura Ritter, lataliyaha dugsiga sare ee Cooper. "Waa 'hal-joogsi-dukaan' ah in la helo muusig dejiya oo la dhegeysto, ciyaaro madadaalo leh marka nasasho loo baahdo, yoga iyo fidinta si jidhka loo dhaqaajiyo, waxaana ku jira xiriiriyeyaal si loo helo ilaha bulshada ee waxtarka leh," ayay sii raacisay
Xidhiidhada Qolka Degitaanka Virtual
T uu yareeynta Zone
Kheyraadka Bulshada-Dareenka / Caafimaadka Maskaxda
Tikniyoolajiyadda iyo Isticmaalka Internetka
(Liiskan waxaa la cusbooneysiiyay 12/28/2020 markay ahayd 11:10 am.;
Khadadka Rajada Fraser: Waxay taageeri kartaa caafimaadka bulshada-shucuurta, ku darista taageerada dareenka ee deegaanka guriga, helitaanka isuduwidda daryeelka iyo ilaha kale ee bulshada iyo maareynta caafimaadka maskaxda waalidka. 612-446-4673 (612-446-HOPE), cinwaanka iimaylkuna waa FraserHopeLine@fraser.org . Wicitaanada waxaa si toos ah looga jawaabaa inta udhaxeysa 7:00 subaxnimo iyo 7:00 fiidnimo, Isniinta ilaa Jimcaha.
CDC La Qabsashada Cadaadiska Inta Lagu Jiro COVID-19
Taageerada CDC ee dhalinyarada iyo dhalinyarada qaangaarka ah inta lagu jiro COVID-19
Aasaaska Jed: Talooyin ku saabsan Is-daryeelid iyo Maareynta Cadaadiska
Ku Xadgudubka Maandooriyaha iyo Maamulka Adeegyada Caafimaadka Maskaxda (SAMHSA): Daryeelka Caafimaadkaaga Habdhaqanka - Tilmaamaha Masaafada Bulshada, karantiil ahaanta, iyo go'doominta Inta lagu jiro Cudurka faafa ee faafa
SAMHSA: La Qabsiga Cadaadiska Inta Uu Jiro Cudurada Faafa
Shabakadda Qaranka ee Cadaadiska Dhibaatada Carruurta: Hagaha Waalidka / Daryeelaha ee Caawinta Qoysaska La Qabsashada Cudurka Coronavirus 2019 (noocyada Ingiriisiga, Isbaanishka iyo Shiinaha ee la heli karo)
Machadka Maskaxda Caruurta: Kalahadlida Caruurta Coronavirus
Piggy & Bunny iyo Qorshaha Joogitaanka-Guriga - Sheeko loogu talagalay carruurta ku hareeraysan Cudurka Faafa ee COVID-19. Waxaad sidoo kale daawataa fiidiyow sheekada laga aqrinayo https://www.youtube.com/watch?v=k-yQgt3bycw&feature=youtu.be
Khadadka Qoraalka Dhibaatada: Adeegga deg-degga ah ee 24/7 ayaa la heli karaa haddii adiga ama qof aad taqaanid uu la soo derso dhibaato caafimaad maskaxeed. U dir MN lambarka 741741
Warmline Minnesota: Ma tahay qof weyn oo u baahan taageero? La hadal takhasusle khibrad u leh inuu la noolaado xaalad caafimaad dhimir. Wac 651-288-0400 ama farriin qoraal ah "Taageero" u dir 85511
Nooca Ka Hortagga Ismiidaaminta Qaranka: Halbeegga 24/7 wuxuu bixiyaa taageero markii dhib jiro, wuxuu leeyahay ka hortag iyo kheyraad dhibaatooyin adiga ama kuwa aad jeceshahay. Wac 1-800-273-TALK (8255)
Khadka Xadgudubka Maandooriyaha iyo Maamulka Adeegyada Caafimaadka Maskaxda Khadka Caawinta Musiibada: Waxay bixisaa la-talin dhibaatooyinka iyo taageero ah haddii adiga ama xubin qoyskaaga ka mid ah nala soo kulanto murugo shucuur oo la xiriirta musiibo. Wac 1-800-985-5990.
Naafada Hub MN waxay bixisaa macluumaad bilaash ah, gobolka oo dhan, gudbin iyo adeeg caawimaad ah si looga caawiyo dadka naafada ah, cudurada daba dheeraada iyo wakiilladooda inay ku xirmaan adeegyada bulshada.
Tortoise iyo Hare : Buug sheeko oo toos ah oo muusig ku saabsan murugada.
MN Black Community COVID-19 Khadka tooska ah: Khadka tooska ah si loogu caawiyo bulshada Afrikaanka ah ee reer Minnesota ee Minnesota inay si guul leh ugu dhex maraan kheyraadka iyo adeegyada taageera ee loo baahan yahay si loola tacaalo Caafimaadka & Fayo-qabka, Horumarinta Dhaqaalaha, Waxbarashada iyo Saamaynta Qoyska & Dhaqanka ee cudurka faafa ee COVID-19.
Khadka taleefanka ayaa si buuxda u shaqeeya oo la heli karaa 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii si loo siiyo dadka soo wacaya macluumaad muhiim ah oo ku saabsan goobaha baaritaanka fayraska waxayna ku xiraan kheyraadka taageeraya sugnaanta cuntada, caafimaadka jirka iyo maskaxda, shaqada, guriyeynta, daryeelka carruurta, xuquuqda sharciga iyo caqabadaha kale ee la xiriira COVID-19. 612-254-1145.
(Liiskan waxaa la cusbooneysiiyay 12/31/2020 saacadda 9:55 am .; Dugsiyada Aagga Robbinsdale ma kafaala qaadayaan mana taageerayaan waxqabadyada ama ilaha hoos ku taxan.)
Warbaahinta Barashada PBS
Nat Geo 4 Caruur ah
Khadka Tooska ah ee khadka tooska ah
Beerta Xaragada ee Switcheroo
Aqoonyahan Wax Ku Baro Guriga
Kheyraadka Waxbarasho ee Waalidka iyo Carruurta
L ee & Hoose
120 Kheyraadka Waxbarashada Dijital ah
Umeerin bilaash ah
Adeegyada umeerin bilaash ah oo laga helo Maktabada Degmada Hennepin
Caawinaad shaqo guri oo bilaash ah, umeerin khadka tooska ah ah, barashada luqadda iyo waxyaabo badan oo loo maro Maktabadda Degmada Dakota
Kooxda Aqoonyahanada : waa barnaamij xoojinta xirfadaha bilaashka ah oo bixiya umeerin hal-hal ah oo loogu talagalay ardayda barata fasalka PreK-8aad ee akhriska ama xisaabta.
Kheyraadka labada luuqad
Kaararka E-maktabadda waa la heli karaa
Maktabada Degmada Hennepin waxay hada kadhigtay eCards-ka maktabada makhaayadaha inay diyaar u yihiin macaamiisha si ay si dhaqso ah ugu helaan buugaagta la soo dejisan karo, buugaagta maqalka, joornaalada iyo fiidiyowyada. Helitaanka barayaasha khadka tooska ah iyo caawimaadda shaqada guriga ayaa sidoo kale la heli karaa. Macluumaad dheeraad ah iyo codsi khadka tooska ah ayaa laga heli karaa.
Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Hennepin ayaa soo diyaariyey liis deg-deg ah oo ku saabsan ilaha dhaqdhaqaaqa: SHIP Fasallada Waxqabadka Fasalka
Qorshooyinka Barashada Akadeemiyada Khan
Qorshaha waxbarashada fasalka 3aad
Qorshaha barashada Fasalka 4aad
Qorshaha barashada Fasalka 5aad
Qorshaha waxbarashada fasalka 6aad
Qorshaha waxbarashada fasalka 7aad
Qorshaha waxbarashada fasalka 8aad
Qorshaha barashada joomatari
Qorshaha barashada Aljabra 1
Qorshaha barashada Aljabra 2
Madasha Guusha Barashada Ingiriisiga
(Liiskan waxaa la cusbooneysiiyay 12/30/2020 at 10:02 am; Dugsiyada Aagga Robbinsdale ma kafaala qaadayaan mana taageerayaan waxqabadyada ama ilaha hoos ku taxan.)
Halkan ka hel bangiga cuntada ee deegaankaaga.
XALALKA HUNGARKA / MINNESOTA CELIYADA CUNTADA : Wac 1-888-711-1151 ama 651-486-9860 Khadadka Caawinta Saacadaha: Isniinta-Jimcaha 8:30 subaxnimo-4: 30 galabnimo Waxay qiimeyn doonaan xaaladda qofka soo wacaya waxayna xal u heli doonaan baahidooda cunto.
PRISM : Hay'adda adeegga bulshada oo dadka ka caawisa inay daboolaan baahidooda aasaasiga ah ee cuntada, dharka iyo hoyga. Wac ama hubi bogga saacado badan. Waxay u adeegtaa dadka deggan Dooxada Dahabka ah, Rajada Cusub, Robbinsdale, Crystal, Plymouth (Bariga 494), 763-529-1350.
U Dhow : Waxay siisaa gargaar cunno deg-deg ah dadka degan waqooyiga Robbinsdale, Crystal iyo New Hope ee ku nool inta udhaxeysa 42nd iyo 62nd Ave N. Wac 763-533-2836 ama ka hubi shabakada saacado.
CAPI USA: 5930 Brooklyn Boulevard, Brooklyn Center. Talaado Talaado 1-4 galabnimo, Arbaco iyo Khamiista 9 subaxnimo - 12 galabnimo iyo 1-4 galabnimo Qaadista Wadada dhinaceeda waa la heli karaa, 612-767-3691.
CEAP : Waxay bixisaa taageero cunno, dhar iyo u gudbin macluumaad. Wac ama hubi bogga saacado badan. Waxay u adeegtaa dadka degan Brooklyn Center, Brooklyn Park, East Champlin (Bariga Hwy 169). Booqo boggooda ama wac 763-566-9600.
SNAP (Barnaamijka Kaalmada Nafaqada Dheeraadka ah) :
Waxay ka caawisaa reer Minnesota dadka dhaqaalahoodu hooseeyo inay helaan cuntada ay ugu baahan yihiin nafaqo iyo cunto isku dheeli tiran. Barnaamijku wuxuu ku siinayaa taageero ka caawinta fidinta miisaaniyadda cuntada ee gurigaaga. Shuruudaha dakhliga ayaa khuseeya. Waxaa lagala xiriiri karaa 651-431-4050.
SHELF CUNTADA GUDDIGA CUNTADA CUSUB
QAABKA LABAAD EE SABABTA SNAP : Khabiirro ayaa loo heli karaa kaalmada arjiga, baaritaanka u qalmidda iyo helitaanka ilaha bulshadaada. Adeegso qalabka baaritaanka internetka ama wac 651-209-7963.
GUDBINTA GUUD EE SHAQADA METRO : Macaamiisha la aqoonsan yahay ee Metro Mobility iyo macaamiisha Transit Link ee hadda jira waxay hadda ka dalban karaan raashinka qadka internetka iyaga oo laga soo qaado oo loo geeyo gurigaaga.
QEYBTA CUNA: Maktabadda Brookdale, oo ay iskaashanayaan The Sheridan Story, ayaa bixisa xirmooyinka cuntada guriga lagu qaato ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada da'doodu tahay 18 iyo wixii ka yar. Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waxay u qaadan karaan boorsooyin dhalinyarada haddii aysan awoodin inay ka qeyb galaan. Boorsooyinka waxaa laga soo qaadan karaa miiska adeegga. 6125 Shingle Creek Pkwy, Xarunta Brooklyn, 612-543-5600.
WIC: waa barnaamij Waaxda Beeraha ee Mareykanka (USDA) oo ka caawisa haweenka uurka leh ee u qalma, hooyooyinka cusub, dhallaanka iyo carruurta ilaa 5 jirka ah inay caafimaad qabaan. Adeegyada WIC waxaa heli kara degganeyaasha u-qalma dakhliga. Ka wac xafiiska WIC ee Degmada Hennepin lambarka 612-348-6100 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo inaad ballan qabsato.
NAPS: Kaqeybgalayaasha barnaamijka waxaa la siiyaa sanduuq cunno nafaqo leh leh oo ay ka mid noqon karaan miraha qasacadaysan, khudradda iyo casiirka, caano, farmaajo, hilib qasacadaysan, subagga looska ama digirta la qalajiyey, badarka, bariiska ama baastada Kaqeybgalayaashu waa inay ahaadaan kuwa dakhligoodu hooseeyo, dadka degan Minnesota ee jira 60 sano ama ka weyn. Haddii aad u malaynayso inaad u-qalanto fadlan soo wac 651-484-8241 (taleefanka bilaashka ah 800-365-0270) ama emayl naps@2harvest.org wixii macluumaad dheeraad ah.
LOAVES & FISHES: Goobaha Cuntada ee Bulshadu way soo dhaweynayaan qof kasta oo baahan; waxay ku yaalliin kaniisadaha, iskuulada iyo xarumaha bulshada; oo hadda u shaqeeya sidii adeeg laga qaado oo keliya. Wac si aad u xaqiijiso faahfaahinta.
Loaves & Fishes ee Brunswick United Methodist Church: 6122 North 42nd Ave, Crystal, Arbacada 5: 30-6: 30 pm
Kibis & Kaluunka Serenity Village Community Church: 4100 Douglas Street North, Crystal, Jimcaha 5-6: 30 pm
Loaves & Fishes at New Betel: 1115 30th Avenue North, Minneapolis, Isniinta-Jimcaha laga bilaabo 5: 30-6: 30 pm
Loaves & Kalluun ee Kaniisada Brooklyn United Methodist: 7200 Brooklyn Boulevard, Brooklyn Center, Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha laga bilaabo 12-1 pm
CUNTO KASTA : Meelo dhowr ah oo ku yaal magaalooyinka Twin Cities ayaa leh boorsooyin cunto oo kasta oo la heli karo inkasta oo ay tahay Janaayo (halka alaabtu ugu dambayso). Meelaha u dhow waxaa ka mid ah: Brookdale Library, West Metro Fire Department, New Hope YMCA iyo Webber Park Library.
CUNOOYIN BILAASH AH OO LOOGU TALAGALAY CARRUURTA MAGAALADA APP: Cunnooyinka bilaashka ah ee loogu talagalay carruurta ee barnaamijka moobiilku wuxuu ka caawin doonaa qoysaska iyo carruurta inay raashin bilaash ah ka helaan dugsiyada iyo bogagga kale ee Minnesota oo dhan inta lagu jiro xirnaanshaha dugsiga. Sida ay u shaqeyso: ku soo dejiso barnaamijka Cunnada Bilaashka ah ee Carruurta taleefankaaga gacanta, u adeegso barnaamijka si aad u hesho goobta ugu dhow ee cuntada iyo baakadaha cuntada ku iibisa GPS oo guji goobta u dhow oo u adeegso tabta Cunnada Cusboonaysiinta wixii faahfaahin dheeraad ah.
(Liiskan waxaa la cusbooneysiiyay 4/21/2020 1:08 pm; Dugsiyada Aagga Robbinsdale ma kafaala qaadayaan mana taageerayaan waxqabadyada ama ilaha hoos ku taxan.)
Spectrum Internet: dalabku wuxuu bilaabmayaa Isniinta 3/16/2020. Haddii aad xiiseyneyso wac 844-488-8395 (loogu talagalay K-12 iyo shaqsiyaadka da'da kuleejka ah).
Xfinity Comcast: Xfinity waxay ku siineysaa kulkulul goobaha ka baxsan guriga lacag la’aan, oo ay ku jiraan macaamiisha internetka aan Xfinity ahayn. Wixii macluumaad dheeraad ah booqo www.xfinity.com/wifi . Xfinity Comcast sidoo kale waxay siineysaa Bilaash illaa laba bilood Internet Muhiim u ah macaamiisha cusub ee u qalma. Wixii macluumaad dheeraad ah wac 1-855-846-8376 ama booqo internetessentials.com
PC's ee loogu talagalay dadka: waa urur aan macaash doon ahayn oo bixiya kumbuyuutarro qiimo jaban iyo goobo kulul. Wax dheeri ah ka baro www.pcsforpeople.org
Magaalada Minneapolis Wifi: Internet-ka wireless-ka ah ee Magaalada Minneapolis ayaa si ku-meelgaar ah xor u ah hadda. Wax dheeri ah ka baro www.minneapolismn.gov/wireless/index.htm
Cusbooneysiin : wadayaasha soosocda ayaa tirtiray qafisyada xogta ee aaladaha mobilada, fadlan ka xaqiiji santuuqaaga haddii aadan hubin kahor intaadan isticmaalin aaladda mobiilka si aad u dejiso aaladda wifi (Comcast, T-Mobile, AT&T, Sprint, Cox, Verizon, iwm).
Xafiiska Horumarinta Bredbandka ee Minnesota
- Wixii caawimaad ah ee lagu ogaanayo ikhtiyaarrada adeegga khadka ballaadhan ama isku xidhka bixiyeyaasha khadka ballaadhan, fadlan wac 651-259-7610 ama emayl u dir Deed.broadband@state.mn.us
- K12 Kuxidh Barnaamijka Hore
Dugsiga Sare ee Minnesota
Waxay ka caawisaa u qalmida qoysaska helitaanka Chromebook 75% off si looga caawiyo helitaanka qalabka waxbarashada masaafada. Ka dalbo www.mnafterschool.org/apply
Waxay u oggolaaneysaa dadka deegaanka inay ku eegaan adeeg bixiyaasha aaggooda ayna isbarbar dhigaan xulashooyinka ku saleysan baahidooda. Wax dheeri ah ka baro https://www.allconnect.com/internet/cheap .
(Liiskan waxaa la cusbooneysiiyay 3/10/2021 saacadda 3:40 pm; Dugsiyada Robbinsdale Area dugsiyadu ma kafaala qaadayaan mana taageerayaan waxqabadyada ama ilaha hoos ku taxan.)
* CUSUB * Caawinta Kirada Degdega ah ee Degmada Hennepin
Ka codso caawimaad bixinta kirada iyo korantada www.hennepin.us/rent-help .
Caawimaadda kirada degdegga ah ayaa hadda loo heli karaa dadka deggan Degmada Hennepin oo leh kiro aan la bixin iyo dakhli aad u hooseeya.
Waqtiga kama dambaysta ah ee la codsanayo waa 19-ka Maarso duhurkii. Waxaad caawimaad ka heli kartaa bixinta kirada iyo biilasha biilasha.
Caawinaad bilaash ah ayaa la heli karaa si loogu dalbado luqado aan Ingiriis ahayn.
Kani waa bartilmaameed muddo gaaban ah oo la beegsanayo si loo daboolo baahiyaha degdegga ah ee ka jira beesheena. Caawinaad dheeri ah ayaa loo heli doonaa xitaa dad badan oo qayb ka ah barnaamijka Kaalmada Kireynta Degdegga ah ee COVID-19 oo furmaya dhammaadka bishan.
Ijaarku wali wuu ku egyahay inta lagu jiro joojinta ka saarida Gobolka Minnesota. Lagama saari karo guri bixinta kirada awgood iyadoo lagu bixinayo amarka fulinta ee Gudoomiye Walz, laakiin amarkan waa laga yaabaa in dhaqso loo qaado oo waxaad halis ugu jirtaa in lagaa saaro guriga haddii aad leedahay kiro aan la bixin. Codso caawimaad hadda.
Dadka u adeegaya dadka (PPL) 614 3rd Street South, Minneapolis, MN 55415. Telefoon: 612-332-4500.
Dhex-dhexaadinta Bulshada & Adeegyada Dib-u-hagaajinta, INC Telefoon: 763-561-0033 Espanol: 612-629-6058. Email: staff@cmrsmn.org . Xiriirinta bogga: https://smrsmn.org/ (Ka-hortagga la-wareegidda iyo taageerada).
Shabakada Adeegyada Dhalinyarada :
Kheyraadka khadka tooska ah ee adeegyada loogu talagalay dhalinyarada guri la'aanta ah oo ay ku jiraan hoyga la heli karo, xarumaha hoos u dhaca iyo daryeelka caafimaadka, iwm.
Khadka Kheyraadka Dhallinyarada: 763-493-3052 - wuxuu shaqeeyaa 8:00 subaxnimo - 8:00 fiidnimo maalin kasta - oo loogu talagalay dhallinyar kasta oo hoylaawe ah ama qatar ugu jirta hoy la'aan Dhallinyaradu waxay ka tagi karaan farriin shaqaalaha wacyigalinta ayaa la xiriiri doona iyaga si ay u qiimeeyaan baahiyaha isla markaana ugu xiraan dhallinyarada ilaha loo baahan yahay.
Iskaashiga Waxqabadka Bulshada ee Degmada Hennepin: 952-933-3052 - wuxuu siiyaa ilo loogu talagalay kireystayaasha, milkiilayaasha guryaha iyo kuwa wajahaya hoy la'aanta.
EAP: 1-800-657-3710 - waxay caawimaad xagga tamarta ah siisaa kireystayaasha iyo milkiileyaasha guryaha ee dhaqaalaha la daalaa dhacaya.
ACER: 612-430-8678 - waxay siisaa ilo guriyayn iyo taageero kiraystayaasha.
(Liiskan waxaa la cusbooneysiiyay 12/3/2020 saacadda 8:31 am Dugsiyada Aagga Robbinsdale ma kafaala qaadayaan mana taageerayaan waxqabadyada ama ilaha hoos ku taxan.)
Khadadka Khadka Tooska ah ee Gobolka Minnesota ee Dugsiga & Daryeelka Carruurta Telefoon: 651-297-1304.
Daryeelka Carruurta ee MN : 651-290-9704
Ogaysiiska Waalidka : 888-291-9811
Salvation Army : Kaararka basaska iyo kaararka gaaska
Barnaamijka Caawinta Transit (TAP) : $ 1 doolar qiimaha baska.
Garaashka Lift : Dayactir otomaatig ah oo aad u jaban.
BILAASHKA QAYBTA-19 TIJAABO:
Tijaabada Bulshada ee COVID-19
Degmada Hennepin waxay lashaqeysaa iskaashi lala yeesho bulshada si loo bixiyo dhacdooyin tijaabo ah oo amaan ah oo bilaash ah COVID-19 bulshada meelaha ay ka dilaaceen, kiisaska sii kordhaya, ama caqabadaha kale ee marin u helka.
Waxay bixisaa caawimaad kala goynta tamarta, shidaal la'aan / hooseeya taangiga, caawinta bixinta biilasha tamarta iyo hagaajinta foornada milkiilaha guriga.
HAY'ADAHA TAAGEERADA BADAN:
Markaad ka jawaabto dhowr su'aalood oo fudud, waxaad awoodi doontaa inaad aragto inaad xaq u leedahay barnaamijyada taageerada shaqada bulshada. Sidoo kale raadi shelf shelf kuugu dhow adoo galaya nambarkaaga nambarka.
Iskaashiga Waxqabadka Bulshada ee Degmada Hennepin
952-933-9639. Waxay u fidisaa adeegyo shaqsiyaadka wacyigalin; barnaamijyada kaalmada tamarta, guriyeynta, taakuleynta cuntada, caawinta canshuuraha bilaashka ah, adeegyada sharciga, la talinta shaqada, iyo la talinta dhaqaalaha. Tabka Kheyraadka Bulshada wuxuu leeyahay hage loogu talagalay ilaha kale.
WIC (Haweenka Dhallaanka ah iyo Carruurta)
612-348-6100 Xafiiska WIC ee Degmada Hennepin wuxuu caawiyaa haweenka uurka leh ee u qalma, hooyooyinka cusub, dhallaanka iyo carruurta yar yar si fiican ayey wax u cunaan, u bartaan nafaqada, iyo inay caafimaad ahaadaan. Waxay bixisaa waxbarasho nafaqo iyo la-talin, cunno nafaqo leh, iyo u gudbin caafimaad iyo adeegyo kale oo bulsho. Shuruudaha dakhliga ayaa khuseeya.
Macluumaadka Daryeelka Caafimaadka Kharashka / Qiimaha Yar (Waaxda Caafimaadka ee MN)
763-529-1350. Waxay bixisaa cunno, dhar iyo ilaha xasilloonida guryaha.
United Way COVID-19 Sanduuqa Gargaarka Dhaqaalaha Bulshada
800-543-7709 ama 651-291-0211. Waxay bixisaa adeegyo caafimaad oo bilaash ah oo qarsoodi ah iyo adeegyo dad ah.
Isbahaysiga Hogaamiyaasha Aasiya Ameerika
La-hawlgalayaasha Ururrada Aasiya ee reer Minnesota si ay u taageeraan qaybaha nugul ee bulshadeenna. Intaa waxaa dheer, waxaad awood u leedahay inaad uga warbixiso takoorka Waaxda Xuquuqda Aadanaha ee Minnesota adoo u maraya boggan.
Codsiga websaydhkani wuxuu kugu xidhi karaa adeegyada gobolka iyo degmada si looga caawiyo buuxinta baahiyaha aasaasiga ah ee qoyskaaga. U isticmaal si aad u dalbato kaalmada lacagta, dheefaha Barnaamijka Gargaarka Nafaqada Dheeraadka ah (SNAP), kaalmada daryeelka carruurta, iyo Gargaarka Degdegga ah. Wac 651-431-4000 wixii su'aalo ah.
Siinta lacagaha degdegga ah ee yaryar shaqsiyaadka, wac 612-314-5586. Waxay kaloo kaa caawin karaan dhammaystirka codsiyada shaqo la'aanta, fadlan wac 612-217-0282.
Ardayda dugsiga sare ee diiwaangashan hadda waxay xaq u leeyihiin dheefaha haddii shaqadooda ay carqaladeeyeen COVID-19 inta lagu jiro illaa iyo Maarso. Codso halkan , waqtiga kama dambaysta ah waa Dec. 25, 2020.
(Liiskan waxaa la cusbooneysiiyay 12/15/2020 at 10:25 am Dugsiyada Aagga Robbinsdale ma kafaala qaadayaan mana taageerayaan waxqabadyada ama ilaha hoos ku taxan.)
CIYAARAHA IYO HADIYADAHA:
Dukaanka Ciidan ee Carruurta lagu ciyaaro
Carruurta ilaa da'da 14, ee ku nool Anoka, Carver, Chisago, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott, Sherburne, Washington, iyo Wright. Diiwaangelinta 2019 Twin Cities Toy Shop waxay bilaabmaysaa Arbacada, Nofeembar 6 waxayna dhammaaneysaa Sabtida, Dec. 1. Waad iska diiwaan gelin kartaa inaad kaqeyb gasho Dukaankeena Toy adigoo buuxinaya foomkeena diiwaangelinta khadka tooska ah ama waca khadka tooska ah. Khadkeena Twin Cities Toy Shop (651-746-3595) wuxuu furnaan doonaa inta lagu jiro saacadaha shaqada ee maalmaha shaqada si loo diiwaangaliyo loona ka jawaabo su'aalaha. Lagama diiwaangelin karo barnaamij kasta oo toy ah, sida Qalabka Ciyaaraha loogu talagalay.
Alaabada Caruurta Loogu Talo Galay Iyo Hadiyadaha Dhalinyarada
Waxaa ka mid ah gobollada soo socda: Anoka, Blue Earth, Carver, Chisago, Dakota, Freeborn, Hennepin, Ramsey, Rice, Sherburne, Scott, Washington iyo Wright.
Ciida Kirismaska ee Hormarinta Martida Guriga Dhalinyarada
Wuxuu furan yahay sanad walba hal maalin bisha Diseembar, dukaanka masiixiga ee Hospitality House wuxuu waalidiinta siiyaa fursad ay ugu adeegtaan hadiyado caruurtooda si sharaf leh, iyo qiimo ay awoodaan. Goobta ciida iyo dadka wax iibsada waxay siinayaan waalidiinta fursad ay ku raaxaystaan khibrada iyo sidoo kale ku qanacsanaanta bixinta qoysaskooda.
Kufiican Hoodka - Caawinta Ciidaha
Qoysaska diiwaangashan waxay awoodi doonaan inay helaan kaararka hadiyadaha. Wanaagsan ee Hood ayaa iskaashi la yeeshay kaniisada Living Word ee Brooklyn Park sannadkan. Qoysasku waxay isdiiwan gelin karaan laga bilaabo Nov. 2 nd , 2020 iyagoo wacaya 612-217-4003.
KHAYRAAD DHEERAAD AH:
United Way waxay macluumaad ka heshaa hay'adaha bixiya cuntada fasaxa ah, alaabada carruurtu ku ciyaarto ama hadiyado. Wac 2-1-1, telefoonka bilaashka ah 800-543-7709 ama 651-291-0211. Waxaad sidoo kale farriin ugu diri kartaa lambarkaaga boostada 898-211 *. Waxay ka raadin doonaan barnaamijyo ku jira lambarkaaga boostada.
F waxaa loogu talagalay Dhamaan Express
Cuntooyinka cusub ee qiimaha jaban. Waqtigan xaadirka ah kaliya waxay leedahay tiro xaddidan oo iib ah oo leh wadista iyada oo loo marayo qaabka iibka. Ka qaybgal Fare for All site, goobo badan ayaa hadda la heli karaa. Fursadaha lacag bixinta waxaa ka mid ah: lacag caddaan ah, kaarka amaahda / kaarka deynta, ama EBT. Xilliga fasaxa, waxay martigelin doonaan iibin midkood Nofeembar ama Diseembar. Khadadka ugu weyn waa 763-450-3880. Booqo websaydhka meelaha iyo waqtiyada.
Xarunta Dhallinyarada ee Plymouth Christian (PCYC)
Waxay u adeegtaa carruurta Waqooyiga Minneapolis da'da Xannaanada - fasalka 8aad. Bisha Diseembar, PCYC waxay u qaybin doontaa kaararka hadiyadaha qoysaska PCYC si loogu bixiyo cunno ama hadiyado. Wac 612-643-2000 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Ciidanka Badbaadinta Magaalooyinka Mataanaha ah
Xarumaha Salvation Army waa goob qoysaska dhibaatadu ka jirto laga helo caawimaad, oo ay ku jiraan jaakadaha caruurtooda. Booqo mid ka mid ah Xarumaheenna Cibaadada & Adeegga ee mataanaha ah si aad wax uga baratid la kulanka baahida cunuggaaga u qabo jaakad. Sahaydu way xaddidan tahay, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto meesha kuugu dhow ka hor intaadan istaagin si aad u ogaato haddii sahaydu ku heli karaan cabirrada aad u baahan tahay Waxaad u qalmi kartaa gargaar kale intaad booqashada ku jirto, taas oo si shaqsi ah loogala hadli karo mid ka mid ah hawlwadeenadeena kiiska.
Fare Dhammaan Xirmooyinka Fasaxa
Fare For All waxay u adeegi doonaan Xirmooyinka Fasaxa Diseembar on on. Diisambar 21 markay tahay 10ka subaxnimo ilaa 1da duhurnimo ee Bulshada Dooxada Aadanaha ee Dahabka (845 Meadow Lane N) Xirmooyinka ayaa qiimahoodu yahay $ 30 waxaana ka mid ah turkey, danqasho digaag panko, galley macaan, hilib doofaar la duubay hilib doofaar, hilibka hilibka tuscan iyo shukulaatada reexaanta shukulaatada ah, taas oo ka dhigaysa mid si fiican ugu soo qaadashada ciidaha.